स्मिता र टंकको आवाजमा ‘चिटक्क परी बस हैँ? बजारमा (भिडियोसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
स्मिता र टंकको आवाजमा ‘चिटक्क परी बस हैँ? बजारमा (भिडियोसहित)
काठमाडौंः पछिल्लो समयमा चर्चित गायक–गायिका टंक बुढाथोकी र स्मिता दाहालको नयाँ गीत सार्वजनिक गरिएको छ ।
उनीहरुको आवाजमा रहेको ‘चिटक्क परी बस हैँ?’ बोलको गीत आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
यो गीतको म्यूजिक भिडियोमा ‘कार्टुञ्ज क्रु’ले अभिनय गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
गीतको भिडियोमा काटुञ्ज क्रुका सरोज अधिकारी, आश्मा विश्वकर्मा र दिपिका कार्की देखिएका छन् ।
गीतको भिडियो कोरियोग्राफी गम्भीर विष्टले गरेका हुन् भने सरोज ओलीको निर्देशन, नवराज उपे्रतिको छाँयाकन रेनिश फागोको रङ संयोजन र अर्जुन जिसीको सम्पादन रहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस चर्चामा स्मिता, फेरि ल्याइन् यस्ताे गीत (भिडियोसहित)
ट्याग्स: कार्टुञ्ज क्रु, टंक बुढाथोकी, स्मिता दाहाल